Abaphi amaFilisti: Amaqiniso kunye nencazelo
Ukuqonda amaFilista: Ubucala kunye neNcazelo
Laba bantu ba mandulo badlala indima ebalulekileyo kuDavid neGoliath Battle
Ukuthabathela kwiindinyana zaseYiputa kunye neAsiriya kunye neBhayibhile yesiHeberu, siyazi ukuba amaFilisti ayindawo yabemi beFilipi. AmaFilisti ayazi kakuhle ibali leBhayibhile likaDavide noGoliyati, apho amaFilisti, abamelwane bakaSirayeli, balwa namadoda akwaKumkani uSawule, kuquka uKumkani uDavide ozayo. Ziyabonakala kwibali likaSamson noDelila apho iincwadi zeBhayibhile eziphathelele kumaFilisti ziGwebi, ookumkani kunye noSamuweli.
Fumana apho amaFilisti ahlala khona, ukuxhamla kwabo kwiLwandle lwabantu kunye noko siyazi ngokwenene ngembali yabo.
AmaFilisti ayehlala emdeni wecala phakathi kweMeditera kunye nelizwe lakwaSirayeli kunye noYuda owaziwa ngokuba yiFilistiya, ukubhekiselele kwilizwe leenkosi ezintlanu zamaFilisti kumazantsi-ntshona Levant. Namhlanje, ezi ndawo zihlala kumaSirayeli, eGaza, eLebhanon naseSiriya. Ngokutsho kweBhayibhile yesiHebhere, amaFilisti ayehlala ekulwela namaSirayeli, amaKanan kunye namaYiputa awajikelezile. Imizi emikhulu emithathu yamaFilisti yayinguAshdode, iAshkelon, neGaza, apho kwakukho itempile kaDagon. Unkulunkulu wasendulo, uDagon, ubizwa ngokuba nguThixo unyana wamaFilisti kwaye uye waziwa ukuba unqulo oluthixo.
AmaFilisti kunye nabantu baseLwandle
Iirekhodi zaseYiputa ezisusela kwi-12th-13th BC BC zithetha amaFilisti ngokumalunga noLwandle lwaBantu .
Ngenxa yeembali zabo ezifanayo zamanqaku, ukubambisana kwabo kunamandla. Abantu beLwandle babengumdibaniselwano wabahlaseli bemikhosi abaye bacinga ukuba baye bafudukela kwimimandla yaseMedithera kwixesha leBronze Age. Kucaciswe ukuba abantu beLwandle lwabantu base-Etruscan, isiTaliyane, iMycenaen okanye iMinoan.
Njengengqela, ngokuyinhloko bajolise kwiinjongo zabo ekuhlaseleni iYiputa ngo-1200-900 BCE.
Oko Siyazi Ngokwenene
I-Archeologists inzima xa ifika ekuqondeni imbali yamaFilisti ngenxa yokungabikho kweetekisi kunye nezinto ezenziweyo ezishiywe ngabo. Eninzi into eyaziwayo namhlanje ngenxa yokuba ngubani na odibene nayo. Ngokomzekelo, uFaro umGibhithe uRamses III wachaza amaFilisti ngexesha lokulawula kwakhe ngo-1184-1153 BC esithi "amaFilisti ayenziwa umlotha" ngamabutho aseYiputa, kodwa abaphengululi banamhlanje abavumelani nalo mbono.
Nazi ezinye iinkcukacha malunga namaFilistiya:
Iibhotela kunye nemifuno ye-wineries yafunyanwa kwiindawo zokufa zamaFilisti. AmaFilisti avelisa aze adle iziyobisi ezinjengotywala newayini.
Eyaziwa ngokusetyenziswa kwayo kwintsimbi entsha, amaFilisti ayesebenzisa le nto ephezulu kwibhesi, eyayisetyenziswa ngamaSirayeli ngenxa yezixhobo kunye nezinye. Oku kwavumela amaFilisti ukuba angabikho emthethweni kwibala lemfazwe.
Ngekhulu le-8 le-7 BC, eqala ngoTilgath-Pileser III, ubukhosi baseAsiriya eFilipi. Ngo-604 BC uNebhudenetsare wachitha imizi yamaFilisti yaseAshdode, iAkron neAshkelon.
I-shart encinci yombumbi kunye nombhalo obhalwe ngamagama amabini afana ne "Goliath" atholakala kumanxuwa aseGati ngasekupheleni kuka-2005, ukusekwa kwimbali yebali yeBhayibhile yeGoliyati.
> Umthombo: UmFilisti Iconography: Ubutyebi beSimbo neSimboli, nguDavid Ben-Shlomo
Ubukhoboka kunye nobuhlanga eBhayibhileni
Isihlandlo sokufa kukaYesu
INew James James Version
Yintoni uMthendeleko Wokuzinikezela?
ULididia: Umthengisi wePuphu kwiZenzo
IimVesi zeBhayibhile zeSuku lomSebenzi
Funda isinyathelo ngeSiteyathelo elula yokufunda iBhayibhile
Umbala weMbala yePainting: History History 101 Basic Basics
Iifubhiso Zifuma njani?
I-Anabolic ne-Catabolic Hormones kwi-Bodybuilding
I-Volleyball Izithuba: Ngaphandle kweHitter
10 Amanqaku Ngezilwanyana Wonke umntu kufuneka azi
Ngaba iCleopatra Black? Ukulinganisa iProvidence Pro neCon
Imfazwe ye-1812: iMfazwe yaseYork
I-Firstly Mickey Mouse Iikhathuni
Indlela yokukhuthaza umntwana wakho kwiintsuku zokuvavanya
I-Radiohead Imbali kunye neProfayili
Iindlela ezili-12 zokuthi uBatman angathatha uMgcini we-Superman
Yintoni eyenza iMakethe yoKhuphiswano?
Imfazwe YaseMerika: iMfazwe yesiBini yaseManassas
Indlela yokwazisa i-Archangel Raphael
Umshicileli Wembali Yentsapho & Phrinta kwiiNkonzo zoNcedo
Biography kaJacob Riis
URobert AM Stern, Ngokwesiko namhlanje neClassic
Ezili-10 eziMnandi zeMiddle Riddles
Ukuvakalisa iSpanish L
Ukusetyenziswa ngokufanelekileyo 'Kwelo' ngesiNgesi
Inkcazo yeTali yeMali yaseTaliyane, iLarghetto